Radio Vieques: Hitsaboana Ny Nosy Poerto Rikana Taorian’ny Fizàrana Daroka Baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2013 17:23 GMT
Niaritra nihoatra ny 60 taona mahery ny nosy Vieques noho ny fampiasana azy ho tobin-tafika an-dranomasina Amerikana sy faritra nanazarana fidarohana baomba. Na dia tratran'ny aretin'ny homamiadana izay tafakatra 31% mihoatra noho ny faritra sisa ao amin'ny firenena [es] aza ny mponin'i Vieques dia mbola notsipahin'i Etazonia vao haingana fa tsy misy ifandraisany ny taha ambony amin'ny aretina homamiadana sy ny daroka baomba.
Nilaza izao manaraka izao i Robert Rabin, talen'ny onjam-peo, araka ity notaterin'ny El Post Antillano [es] ity:
Fako navelan'ny tafika an-dranomasina Amerikana tao Vieques. Sary tao amin'ny pejy Facebookn'ny Radio Vieques.
Tamin'ny taona 2001, nanome baiko hialàn'ny tafika an-dranomasina ao amin'ny nosy ny Filoha George W. Bush noho ny hetsika goavambe tao Poerto Riko, sy ny fisamborana olona an-jatony avy amin'ny sehatra sosialy sy politika noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny tsy fankatoavan'ny sivily manohitra ny tafika an-dranomasina. Tamin'ny taona 2003, niala tanteraka ny tafika an-dranomasina ary nakatona ny toby miaramila, saingy lasan'ny Minisiteran'ny Atitany Amerikana ny tany niasan'ny tafika an-dranomasina tamin'izany, ka nijanona teo am-pelatanan'ny governemanta federaly Amerikana. Folo taona taty aoriana, mbola miandry ny governemanta Amerikana handray ny andraikiny amin'ny fanadiovana ny tany feno fako navelan'ny tafika an-dranomasina ny mponin'i Vieques.
Nanjaka tao amin'ny aterineto nandritra ny volana maro ny fanentanana fanangonam-bola hananganana ilay onjam-peo. Nisy ny rakitsary noforonina tamin'ny sehatra fampiasan'ny Artists for Media Diversity (Mpanakanto manohana ny fahamaroan'ny Media), fikambanana natokana hanohana ny radiom-paritra amin'ny alalan'ny famoronana rakitsary virtoaly. Mpanakanto tahaka an'i Willie Nelson sy i Calle 13 no nanao fampisehoana mba hanampy amin'ny fanangonam-bola. Ahitana ny Radio Vieques ihany koa amin'ny Facebook [es] ary niditra tao amin'ny Twitter [es] vao haingana ihany koa izy.
Fonontsary nopihana avy tamin'ity lahatsary [es] ity.